iPad - iPhone News | IPhone News (Pejy 2)
Tsy mahita maodely iPad misy amin'ny tranokala Apple izahay ao anatin'ny fizarana vokatra nohavaozina
Ireo tovolahy ao amin'ny AstroPad dia nanambara ny fanombohana ny kinova beta voalohany ho an'ny Windows
Raha ny filazan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo, ny iPad Air dia hanana efijery miniLED amin'ny 2022 sy ny efijery iPad Pro OLED
Tranga iray eo amin'ny talantalana ao amin'ny magazay malaza iray dia manambara ny fahatongavan'ny iPad vaovao miaraka amin'ny famolavolana iPad Air ankehitriny
Manohy ny tsaho milaza ny fanavaozana ny mini iPad, asehonay aminao ny hevitra mahaliana izay, indrisy, tsy mifototra amin'ny tsaho.
Ny tsaho dia manondro iPad mini Pro mandritra ny tapany faharoa amin'ny 2021
Ho an'ny tapany faharoa amin'ny 2021, Apple dia afaka manavao ny iPad mini miaraka amin'ny kinova Pro, miaraka amin'ny haben'ny efijery lehibe kokoa ary Touch ID eo amin'ny sisiny
IPadOS 14.5 beta dia manolotra ny Espaniola amin'ny fomba fanoratana 'Scribble'
Amin'ny iPadOS 14.5 dia azontsika atao ny mampiasa ny fiasa Scribble na ny sora-tanana amin'ny Apple Pencil amin'ny fiteny maro, anisan'izany ny Espaniôla.
Ny vola azo amin'ny fivarotana iPad dia mitombo 41%
Ny fidiram-bola ateraky ny fivarotana ireo maodely iPad hafa natolotr'i Apple teny an-tsena dia nitombo 41% tamin'ny telovolana lasa teo
Loharanom-baovao faharoa milaza fa ny iOS 15 dia tsy ho tonga na ny iPhone 6s na ny iPad Air 2, iPad mini 4 ary ny iPad fahadimy.
IPad mini 6 dia hampihena ny bezel hanitatra ny haben'ny efijery
Ny fanavaozana ny iPad mini 5 dia hidika ho fitomboan'ny haben'ny efijery, manomboka amin'ny 7.9 santimetatra ankehitriny ka hatramin'ny 8.4 santimetatra.
IPad Air 4 vaovao, unboxing ary fahatsapana voalohany
Notsapainay ny iPad Air 4 vaovao ary lazainay aminao ny vaovao lehibe sy ny fahatsapana voalohany amin'ity takelaka vaovao ity
'Boiiing', fanambarana vaovao momba ny iPad an'ny Apple Air 2020
Touch ID eo amin'ny bokotra hidy, famaranana isan-karazany, Apple Pencil mahery ... ireo vaovao iPad Air rehetra amin'ny doka 'Boiiing'.
Ny iPad Air vaovao izao dia azo natokana ho an'ny fandefasana amin'ny 23 Oktobra
Ny iPad Air vaovao izao dia azo natokana ho an'ny fandefasana amin'ny 23 Oktobra. Daty mitovy amin'ny iPhone 12 sy iPhone 12 Pro.
Ny iPad Air vaovao dia azo alaina amin'ny 23 Oktobra
Ny iPad Air vaovao dia azo alaina amin'ny 23 Oktobra. Best Buy dia manana izany ao amin'ny tranonkalany ho "misy" amin'ny 23 Oktobra.
Ny iPad Air dia efa tao amin'ny magazay Apple hanomboka mivarotra
Apple dia efa afaka nanana amina magazay manerana an'izao tontolo izao ny tahirin'ny iPad Air vaovao natolotra tamin'ny volana septambra
Ny iPad Air vaovao dia tantanan'ny RAM 4 GB
Ny benchmak voalohany an'ny iPad Air generasi faha-4 dia navoaka, fehin-kevitra manondro fa tantanan'ny 4 GB RAM izy io
Ny zava-bita lehibe momba ny injeniera amin'ny fampidirana Touch ID ao amin'ny bokotra herinaratra an'ny iPad Air 4
Ny filoha lefitra Apple roa dia miresaka momba ny zava-bita izay ny fampidirana ny Touch ID ao amin'ny bokotra herin'ny iPad Air 4
Izany no mety ho fisehoan'ny widgets amin'ny efijery an-trano iPad
Ity foto-kevitra iPadOS 15 ity dia mampiseho izay mety ho endrik'ireo widgets amin'ny efijery an-trano iPad, fampiasa iray izay efa ananan'ny iOS 14.
Ny fitaovana fampiroboroboana ho an'ny iPad Air vaovao dia alefa amin'ny magazay
Mark Gurman namoaka fa ny fitaovana fampiroboroboana ny iPad Air vaovao (afisy, horonan-tsary) dia efa nalefa tany amin'ny magazay hanombohana
Ahoana ny fomba hanerena fampiharana akaiky amin'ny iPad miaraka amin'ny klavie fizika
Ahoana no ahafahantsika manery ny fanakatonana ny rindranasa amin'ny iPad mivantana avy amin'ny kitendry mifandray nefa tsy mikasika ny efijery
Adobe Illustrator dia ho tonga amin'ny iPad amin'ny 21 Oktobra
Adobe dia manamafy ny fanombohana ny Adobe Illustrator ho an'ny iPad amin'ny 21 Oktobra ho avy izao, azonao atao rahateo ny mitahiry azy ao amin'ny App Store.
Sintomy ny rindrina manokana an'ny iPad Air 2020 vaovao
Raha te-hisintona ireo sary vazivazy vaovao miaraka amin'ny iPad Air generasi faha-4 ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fanaovana azy.
iPad Air (2020): Filokana vaovao an'ny Apple amin'ny antsipiriany
Jereo miaraka aminay ny antsipirian'ny miafina rehetra momba ny Apple iPad Air vaovao izay tanjony hanomezana fahafaham-po na dia ny tena mitaky be aza.
20W charger an'ny iPad Air vs. 18W an'ny iPad Pro vaovao
Apple dia manampy charger 20W ao amin'ny iPad Air vaovao raha ampitahaina amin'ny 18W izay nampiana tao amin'ny iPad Pro tamin'ny volana martsa.
Ny iPad Air vaovao dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny kojakoja iPad Pro 11-inch
Aorian'ny fahafantarana ny refin'ny iPad Air vaovao dia afaka milaza isika fa mifanaraka amin'ny kojakoja rehetra an'ny iPad Pro 11 santimetatra.
Ny fiverenan'ny revolisionera ny Touch ID amin'ny New iPad Air
Ny fampiharana ny sensor Touch ID an'ny iPad Air dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo zava-baovao farany amin'ilay maodely vaovao
Ity ny fanambarana ny Apple iPad Air vaovao
Ny fanambarana ny iPad Air vaovao natombok'i Apple dia manasongadina ny kalitaon'ny maodely vaovao ao anatin'ny iray minitra monja
IPad 8 dia mandray ny Neural Engine miaraka amin'ny puce A12 Bionic
Apple dia nanolotra ny iPad 8 vaovao miaraka amin'ny efijery 10,2-inch ary puce A12 Bionic miaraka amin'ny Neural Engine andiany faharoa.
iPad Air 4: loko vaovao, famolavolana vaovao ary Touch ID natsofoka tao amin'ny bokotra ambony
Ny iPad Air 4 vaovao dia manolotra famolavolana vaovao, teknolojia Touch ID eo amin'ny bokotra fanidiana farany ambony, ary loko vaovao.
Apple dia mandefa laharana iPad vaovao, manasongadina iPad Air vaovao miaraka amina endrika Pro
Tsy ampoizina i Apple amin'ny alàlan'ny fandefasana ny karazana iPad vaovao manasongadina ny iPad Air vaovao izay mampiditra ny volavolan'ny iPad Pro amin'ny loko marobe.
Ny hetsika amin'ny 15 septambra dia hifantoka amin'ny Apple Watch sy ny iPad araka an'i Gurman
Ny hetsika manaraka nataon'i Apple dia ny 15 septambra. Mpanadihady maro, anisan'izany i Mark Gurman no manome toky fa hahita Apple Watch sy iPad vaovao isika.
Tsy mijanona ny tsaho momba ny fanolorana vokatra vaovao nataon'i Jon Prosser ary io no anazavany azy amin'ny lahatsorany farany
Ity fotokevitra ity dia mampiseho ireo tsaho tonga amin'ny iPad Air 4 vaovao
Ity fotokevitra vaovao ity dia mampiseho ny fanavaozana antenain'ny iPad Air 4 izay mety hampiditra ny endrika ny iPad Pro: kely kokoa ny kofehy ary ny efijery bebe kokoa.
Sivana ny tetika sasany amin'ilay maodely iPad namboarina
Ny fanivanana ny drafitra sasany an'ny iPad dia mametraka solika bebe kokoa amin'ny afo alohan'ny fampisehoana modely vaovao amin'ity 2020 ity
Misy iPad Air vaovao miseho miaraka amin'ny famolavolana ny iPad Pro
Ny torolàlana momba ny torolàlana ho an'ny iPad Air vaovao dia miseho miaraka amina endriny nohavaozina tanteraka, amin'ny fomban'ny iPad Pro.
Apple Watch sy iPad vaovao dia miseho ao amin'ny EEC
Raha ny tsiliantsofina re, dia fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ny modely vaovao an'ny Apple Watch sy iPad, ary anio ...
Ny iPad dia mitohy mitarika ny tsenan'ny takelaka manerantany
Na dia ny mpampiasa Android aza miaiky fa ny iPad no takelaka tsara indrindra hitantsika eny an-tsena, ...
Hevitra iPad kely tsy misy bezel ho tianao
Fomba iray momba ny mini iPad izay ilainy ny bezel amin'ilay maodely iPad Pro vaovao. Zavatra tadiavin'ny maro amintsika ary mety ho tonga indray andro any
iPadOS 14 dia misy zava-baovao marobe ho an'ny takelaka Apple, ary amin'ity horonantsary ity dia asehonay anao ireo miavaka indrindra ho an'ny iPad.
IPad 10,8 vaovao ho an'ity taona ity ary mini 8,5 ho an'ny 2021
Ny mpandalina Ming-Chi Kuo dia manohy mamoaka tsaho sy famoahana momba ireo iPad vaovao hitanay tamin'ity taona ity sy amin'ny manaraka
IPadOS 14 manampy fanampiana amin'ny filalaovana totozy sy fitendry
Ny kinova manaraka an'ny iPadOS dia hanisy fanohanan'ny kitendry sy totozy, ka hahatonga azy io ho sehatra tsara kokoa ho an'ireo mpilalao mitaky be indrindra.
Modely IPhone sy iPad mifanaraka amin'ny iOS / iPadOS 14
Taorian'ny fampisehoana ofisialy ny kinova vaovao an'ny iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 ary macOS Big Sur, dia fantatray izao ny maodely mifanaraka amin'ny iOS 14
Pixelmator Photo for iPad dia nohavaozina amin'ny kinova 1.3
Pixelmator Photo for iPad dia nohavaozina amin'ny kinova 1.3. Fampisehoana vaovao ho an'ny fampiharana fampiharana sary mahery io.
IPads ho avy dia mety mifanaraka amin'ny iPad Pro Magic Keyboard
IPads ho avy dia mety mifanaraka amin'ny iPad Pro Magic Keyboard. IPad Air 11 santimetatra ho avy no mety ho voalohany.
iPadOS 13.5.5 dia hanampy hitsin-dàlana fitendry vaovao
Ny fanavaozana manaraka ny iPadOS 13.5.5 dia hanisy sisin-dàlana fitendry hanovana ny famirapiratan'ny efijery
Microsoft Remote Desktop dia manampy ny fanohanana ny totozy sy ny trackpad amin'ny fanavaozana farany
Nohavaozina ny rindranasa Remote Desktop an'i Microsoft mba hanolotra ny fanohanan'ny totozy sy ny trackpad, anisan'izany ny kitendry vaovao an'i Apple.
Niantso ny LG i Apple mba hampiakatra haingana ny famokarana efijery LCD hahafeno ny tinady betsaka avy any Azia
Taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny iPad noho ny fifandraisan-davitra sy ny sekoly virtoaly, Apple dia tokony nangataka tamin'i LG mba hampiakatra haingana ny famokarana efijery
Ny lahasa farany izay vao nahazo Word, Excel ary Powerpoint ho an'ny iPad dia ahafahantsika manokatra ilay fampiharana mitovy indroa amin'ny efijery fisarahana.
Birao hanampy fanampiana ny totozy sy ny trackpad amin'ny volana ho avy
Amin'ny volana ho avy, Microsoft dia hanampy trackpad sy totozy fanohanana ho an'ny be mpampiasa indrindra birao fitaovana eran'izao tontolo izao: Office
Ahoana ny fametrahana mora foana ny pointer iPad
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao manamboatra ny pointer iPad amin'ny zavatra tadiavinao avy amin'ny sehatra Accessibility.
Ulysses tonian-dahatsoratra mahazo fanohanana trackpad amin'ny iPad
Ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra ho an'ny iOS, iPadOS ary macOS, Ulysses, dia nahazo fanavaozana vaovao izay manampy ny trackpad sy ny totozy fanohanana amin'ny iPad.
Apple nanjakazaka tamin'ny indostrian'ny takelaka tamin'ny taona 2019
Ny andiana processeur an'ny Apple dia mijanona ho ny antony lehibe manohizan'ny Apple iPad manjaka ny tsenan'ny takelaka izay tsy misy mpifanandrina aminy mihitsy
Ny kitendry trackpad an'ny Logitech ho an'ny elanelan'ny iPad tsy Pro dia efa azo alefa mialoha
Ny kitendry vaovao an'i Logitech miaraka amin'ny trackpad dia efa hita ao amin'ny Apple Store amin'ny vidiny 149 euro, ho an'ny iPad Air ho an'ny laharana faha-3 sy iPad ho an'ny taranaka faha-7
Fantastical koa dia manampy ny fanohanan'ny trackpad amin'ny endriny vaovao ho an'ny iPad
Ny kinova vaovao an'ny Fantastical for iPad dia manampy ho zava-baovao indrindra amin'ny fahafinaretana amin'ny trackpad.
Ny tsaho momba ny efijery mini-LED dia mitohy amin'ny faran'ny taona
Toa ny efijery mini-LED dia mbola ao anatin'ny crosshairs an'ny mpandalina ary aorian'ny fandefasana ny iPad Pro dia miseho indray izy ireo
Ahoana ny fomba fanesorana hidy samihafa amin'ny iPhone
Ny fanafoanana ny sasany amin'ireo hidin-trano izay mety ho hitantsika amin'ny iPhone, na vaovao na faharoa, dia dingana tsotra amin'ny LockWiper
IPad vaovao iray voasoratra ao amin'ny EEC
IPad vaovao iray dia voasoratra ao amin'ny tahiry EEC. Ny A2229 ihany no fantatsika ny momba azy, ary hitondra iPadOS 13 ao anatiny izy.
Apple dia mandefa programa fanamboarana maimaimpoana ho an'ny vondron-tsivana iPad Air 3. Tampoka teo dia nalalaka ilay efijery. Apple manamboatra azy maimaim-poana.
Tabilao Mini-LED ho an'ny iPads sy MacBook amin'ny faran'ny 2020
Apple dia afaka manampy takelaka mini-LED amin'ny faran'ity taona ity ho an'ny iPad Pro 12,9-inch sy MacBook medium DigiTimes
Mpamatsy singa Apple isan-karazany voampanga ho nanandevo ny Uighur
Ny sasany amin'ireo mpamatsy singa ho an'ny iPhone sy iPad dia voapanga ho nanandevo ny foko Silamo Uyghur monina ao Shina.
Ny fangatahana ny iPad dia mitombo noho ny coronavirus
Any Shina dia mitombo ny fangatahana iPad. Izany dia satria mpampiasa maro no maniry ny hanohy hiasa sy hianatra any an-trano.
iPadOS 13.4 dia hahafahantsika mamerina manendry ny kitendry ivelany amin'ny kitendry ivelany
Miaraka amin'ny iOS 13.4 Beta 1, Apple dia namoaka ny beta voalohany an'ny iPadOS 13.4, kinova izay hitondra antsika ny famerenanana ireo lakile ho an'ny kitendry ivelany.
Company of Heroes dia ho tonga amin'ny iPad amin'ny 13 Febroary
Company of Heroes dia ho tonga amin'ny iPad amin'ny 13 Febroary. Ny lalao paikady malaza tamin'ny Ady lehibe II dia natao manokana ho an'ny takelaka.
Isan'andro - iPad 10 taona
Rehefa afaka folo taona, ny iPad dia mbola mpanjakany takelaka ihany. Hodinihinay ny làlan-kizorany manomboka amin'ny fanombohany ka hatramin'ny ankehitriny.
12,9 ″ iPad Pro ary 16 Pros MacBook Pro miaraka amin'ny takelaka mini-LED
Nanadihady vaovao momba ny fisehoan'ny 12 "MacBook Pro sy iPad Pro ny mpandalina TF International Securities fanta-daza Ming-Chi Kuo
Ny fandefasana IPad dia nitombo 4% tamin'ny telovolana lasa teo
Ny iPad dia mbola mpanjaka amin'ny tsenan'ny takelaka, ary nandritra ny telovolana farany, nitombo 4% ny isan'ny fandefasana
Mini-LEDs ho an'ny 2020 hoy ny mpandalina Ming-Chi Kuo
Ny mpandalina Ming-Chi Kuo dia tsy nilefitra tamin'ny famoahana sy tsaho momba ny vokatra Apple ary tamin'ity indray mitoraka ity dia niresaka momba ny efijery Mini-LED ho an'ny iPads izy.
Pixelmator Photo izao dia mamela antsika hamorona sary amboarina
Pixelmator Photo dia nohavaozina mba hahafahantsika manangona sary mivantana avy amin'ny iPad anay noho ny fizotran'ny asa.
IPad 10,2-inch dia manana RAM 1GB mihoatra ny iPad 2018
Ny iPad 2019, rehefa avy nandalo ny tanan'ny iFixit, dia mampiseho amintsika ny fomba fananany RAM 3 GB total, iray hafa noho ny iPad 2018
Androany manomboka tonga any am-pivarotana ireo iPad vaovao 10,2-inch vaovao
Ireo modely iPad vaovao 10,2-inch miaraka amin'i Retina dia manomboka tonga amin'ny fomba ofisialy any amin'ny magazay aorian'ny fampisehoana azy ireo
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny iPad vaovao 10.2-inch
Apple dia nanolotra ny iPad vaovao 10.2-inch mifanaraka amin'ny Smart Keyboard, ny Apple Pencil izay miaraka amin'ny iPadOS dia hiara-hiasa.
Tsaho manapaka: Apple dia hampiditra iPad vaovao 10,2-inch
Mark Gurman dia manamafy ny tenany amin'ny tsaho momba ny fanolorana iPad 10,2-inch sy MacBook Pro vaovao
Hitan'ny mpandinika ny fomba hamitahana ny Face ID amin'ny alàlan'ny fametahana solomaso amin'ny olona matory
Fomba vaovao iray hialana amin'ny fiarovana ID Face hita miaraka amina olona matory sy solomaso misy kasety.
Apple dia manoratra iPad roa vaovao hanombohana ity fararano ity
Apple dia nanoratra modely iPad roa vaovao izay azo atomboka amin'ity fararano ity ary mifanaraka amin'ny iPad 10,2 "honohono izay hisolo ny iPad 2018
Misaraka zahana ary mihetsika ankehitriny dia hita ao amin'ny Spotify ho an'ny iPad
Ny fanavaozana farany an'i Spotify dia manampy multitasking amin'ny iPad amin'ny farany. Split View sy Slide Over dia azo alaina ao amin'ny mpilalao streaming ho an'ny iPad
Apple dia manoratra modely iPad iPad dimy mifanentana dimy ao Eurasia
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia manoratra ireo maodely iPad vaovao ho hitantsika mandritra ny volana ho avy miaraka amin'ny iPadOS ho toy ny rafitra miasa.
Ny tsaho sasany dia manondro iPad Pro azo soloina miaraka amin'ny 5G
Mbola misy tsaho eo amin'ny latabatra indray fa afaka mahita iPad Pro mivalona miaraka amin'ny teknolojia 5G tsy ho ela isika. Te hanana an'ity karazana iPad ity ve ianao?
Hampianatra anao izahay, amin'ny dingana vitsivitsy, ny fomba famonoana vonjimaika na hamafana maharitra ny kaonty Facebook anao.
Ny taranaka iPad manaraka dia hanana efijery OLED
Ny iPhone X no terminal Apple voalohany nampiasa teknolojia OLED teo amin'ny efijery, fananganana izay ...
Luna Display dia nohavaozina manandrana manavaka ny tenany amin'ilay Sidecar vaovao an'i Apple
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Luna Display dia miteny mialoha ny famoahana ny Sidecar vaovao an'i Apple izay afaka manaloka ny fampiharana maro-efijery amin'ny iPad
Ireo ny hitsin-dàlan'ny keyboard an'ny iPadOS 13 vaovao
Izahay dia mitondra anao ny lisitry ny hitsin-dàlana fitendry izay hifindra manodidina ny iPadOS 13 vaovao, ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny iPads.
Ny iPadOS vaovao, ny rafitra miasa ho an'ny iPad, dia eto.
Rehefa avy niresaka momba ny tvOS 13, ny watchOS 6 ary ny iOS 13, dia namoaka ny arsenaliny rehetra i Apple ary nanolotra, ho an'ny ...
Mampiasa ny iPad ho efijery faharoa, zava-baovao amin'ny macOS 10.15
Ny iPad dia azo navadika ho efijery ivelany ho an'ny iMac na MacBook antsika, ahafahantsika mandefa windows avy amin'ny macOS 10.15
Ny iPad veteran 2 dia tsy afaka amboarin'i Apple amin'ny fomba ofisialy intsony
Hatramin'ny 30 aprily, iPad 2 dia tsy azo amboarina amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny toerana fivarotana sy fanamboarana ofisialy an'i Apple.
Fitsapana faharetana mafy ho an'ny mini iPad iPad faha-5 [Video]
Ny fitsapana ny adin-tsaina ho an'ny fitaovan'ny Apple dia manome antsika ny faharetany. Amin'ity tranga ity dia miankina amin'ny kely amin'ny iPad, ny mini iPad
IPad case mpanamboatra UAG mandefa maodely iPad mini sy iPad Air vaovao
Ny fanavaozana nandrasana hatry ny ela an'ny iPad amin'ity taona ity dia tsy notanterahina tamin'ny alàlan'ny hetsika iray, fa ...
Toy izao ny endrik'ilay atin'ny iPad Air vaovao
iFixit dia mampiseho amintsika ny atin'ny iPad Air 2019 vaovao natombok'i Apple herinandro vitsivitsy lasa izay fa tsy mila hetsika akory
Ny mini iPad vaovao dia mitovy be amin'ny iPad mini 4
Ny fanadihadihana farany iFixit an'ny iPad mini (2019) dia manamarina ny tsaho milaza fa mizara singa be loatra amin'ny teo alohany ity iPad vaovao ity.
New iPad Air, ny iPad ho an'ny ankamaroan'ny olona
Izahay dia mamakafaka ny iPad Air vaovao, ny eo afovoany vaovao an'ny Apple miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa izay mahatonga azy io ho sain'ny olona rehetra
Ny iPad vaovao dia tantanan'ny 3 GB RAM ary manao mitovy amin'ny iPhones farany
Ny iPad vaovao 2019 dia nandalo tao amin'ny Geekbench ary mampiseho amintsika fampahalalana mahaliana toy ny RAM sy ny hafainganam-pandehan'ny processeur.
Ireo no fonosana vaovao ho an'ny iPad vaovao
Ankoatry ny mini iPad sy iPad vaovao ao amin'ny Apple dia mandefa ny fonony vaovao ihany koa izy ireo mba hiarovana azy ireo tsara.
Ny tranga iray dia hanome ny famolavolana ny iPad mini an'ny taranaka fahadimy
Akanjo iray ho an'ny mini iPad iPad an'ny taranaka fahadimy dia hanambara ny endrik'ity iPad ity. Ho hitantsika raha aseho na tsia amin'ny teny ifotony ny alatsinainy 25 martsa
Ny iPad taranaka fahafito dia hanana endrika mitovy amin'ny ankehitriny ary hitazona ny vidiny
Ny iPad 2018 dia havaozina amin'ity taona ity miaraka amin'ny maodely izay ho ny taranaka fahafito an'ny iPad. Ho fanampin'izay, andrasana ...
iPad Pro 2019, iPad 10,2-inch ary mini iPad iPad an'ny taranaka faha-5. Tombana bebe kokoa avy any Ming-Chi Kuo
Ny tsaho momba ny fananganana iPad vaovao dia avy amin'ny tanan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo, izay namela voahangy maromaro nandritra ny ora farany
Ny orinasa Cupertino dia misoratra anarana iPad vaovao 6 miaraka amin'ny Vaomieran'ny Toekarena Eurasia ka hanana modely vaovao isika atsy ho atsy
IPad 5 sy iPad mini vaovao vaovao ho an'ny fiandohan'ny taona 2019
Ny voalohany dia manakaiky ary, miaraka aminy, ny daty fanavaozana ny iPad tiany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia toa ...
Zagg dia manolotra ny tsipika vaovao momba ny Keyboard Cover ho an'ny iPad sy iPad Pro
Ny mpanamboatra tranga ho an'ny iPad Zagg, dia nanangana andiana tranga vaovao ho an'ny iPad sy iPad Pro amin'ny endriny samihafa.
Miseho ny sary vaovao an'ny mini iPad izay havoaka amin'ity taona ity
Tafaporitsaka izay mety ho tranga iPad mini 2019 voalohany
Tropico dia misy amin'ny iPad izao
Ny mini iPad misy efijery bebe kokoa sy iPad fidirana vaovao ho an'ny 2019
Apple dia miasa mba hanao chips modem azy manokana
Navoaka ny fampahalalana fa mety ho eo am-pikarohana ireo bandy Cupertino mba hanao chip modem ho an'ny iPhones sy iPad manaraka.
Ny iPad 2018 dia misy amin'ny fizarana nohavaozina an'ny Apple
Ny kianja filalaovana izao dia mamela antsika hahita votoatin'ny antoko fahatelo amin'ny fomba mora kokoa
Ny rindranasa hanombohana fandaharana amin'ny Swift avy amin'ny iPad, Playgrounds dia nohavaozina mba hanatsarana ny fidirana amin'ny atiny atiny fahatelo.
Apple Pencil dia azo sokirina maimaim-poana amin'ny laser
Adobe dia nanambara ny Photoshop CC ho an'ny iPad sy ireo fampiharana vaovao ho an'ireo matihanina amin'ny famoronana
Luna Display, ilay fitaovana manampy antsika hampiasa ny iPad ho efijery faharoa ho an'ny Mac, efa misy izao
Ny fitaovana fampisehoana Luna Display izay ahafahantsika mampifandray ny iPad amin'ny Mac hampiasantsika az